मेषा मेष Archives - सत्य वेद पुुस्तकहरू
Tag: मेषा मेष
तपाईको मेष राशीलाई प्राचीन राशिफल
एरीस वा मेष प्राचीन राशिको आठौं अध्याय हो र आउँदै गरेको विजयको परिणाम हामीलाई घोषणा गर्दै यो एकाईको अन्त्य गर्छ। मेषले यसको माथि उठेको टाउकोको साथै एउटा जीवित भेडाको आकार दिन्छ । आजको आधुनिक ज्योतिषशास्त्रमा प्राचीन राशिको अध्यन गर्दा, तपाईले कुंडलीमार्फत सल्लाह लिनुपर्दा, मेष भन्नाले प्रेम, सौभाग्य, धन, स्वास्थ्य र तपाईंको कुंडली मार्फत तपाईंको व्यक्तित्वको अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्नु हो।
तर सुरुमा मेषको अर्थ के हो?
सचेत रहनुहोस् ! यसको उत्तरले तपाईंको ज्योतिषालाई अप्रत्याशित तरिकाबाट खोल्दछ – जब तपाईंको कुण्डली जाँच गर्नुहुन्छ तपाईंले आफुलाई सोचेको भन्दा फरक यात्रामा संलग्न भएको पाउँनुहुन्छ …
हामीले प्राचीन ज्योतिषको अन्वेषण गरेका थियौं, र प्राचीन कुंडलीको कन्या देखि मिन सम्म हेर्दै गर्दा ,हामी मेषका साथ जारी राख्छौं। ताराहरूको यो प्राचीन ज्योतिषमा प्रत्येक अध्याय सबै व्यक्तिहरुका लागि थियो। यदि तपाईं आधुनिक कुंडली अर्थमा ‘मेष’ हुनुहुन्न भने पनि मेषको ताराहरुमा रहेको पुरानो कथा जान्न लाभदायक छ।
ताराहरूमा नक्षत्र मेष
मेष बनाउँदै गरेको ताराहरूलाई अवलोकन गर्नुहोस्। के तपाईं यस फोटोमा माथी उठाएको भेडा (नर भेडा) को टाउको जस्तो केही देख्न सक्नुहुन्छ?
आकाशमा मेष तारा नक्षत्र
मेषमा ताराहरुलाई रेखाहरूको साथ जोड्दा पनि भेडा स्पष्ट हुँदैनन्। त्यसोभए शुरुको ज्योतिषीहरूले कसरी यी ताराहरूबाट एक जीवित भेडाको बारेमा सोचे?
रेखहरू जोडिएको ताराहरू मेष रकम नक्षत्र
जहाँ सम्म हामीलाई थाहा छ यो चिन्ह मानव इतिहासमा पछाडि फर्केर जान्छ। मिस्रको पुरानो डेन्डेरा मन्दिरमा राशि हेर्नुहोस् जहाँ मेष राशि रातोले गोलो घेरा लगाइएको छ ।
चौधो मिश्री डेन्डेरा मन्दिर रकममा मेष
तल मेषका परम्परागत तस्बिरहरू छन् जुन हामीलाई थाहा छ ज्योतिषशास्त्रले धेरै पहिला प्रयोग गरेको छ ।
मेष ज्योतिषशास्त्र नक्षत्रको तस्बिर
प्राचीन मेष राशिको तस्बिर
चौधरी मेष राशिको तस्बिर
अघिल्लो नक्षत्रहरू जस्तै, जीवित भेडाको तस्बिर पहिला ताराहरुबाट अवलोकन गरिएको थिएन । बरु, एक भेडाको विचार पहिलो आयो। पहिले ज्योतिषीहरूले ज्योतिषशास्त्र मार्फत तस्विरलाई ताराहरू मा एक माथि अर्को चिन्हको रूपमा राखे ।
भेडाको अर्थ के थियो?
तपाई र मलाई के महत्व छ?
मेषको मुल अर्थ
मकरका साथै बाख्रा मरेको थियो जसका कारण माछाको पुच्छर बाँच्न सकोस् । तर मीनको बन्धनले अझै पनि माछा समातिएको थियो । त्यहाँ शारीरिक क्षय र मृत्युको दासत्व अझै बाँकी छ। हामी धेरै समस्याहरूको सामना गर्छौं, बुढो हुन्छौं र मर्दछौं! यद्यपि हामीसँग शारीरिक पुनरुत्थानको ठूलो आशा छ। मेष, जसको अगाडिको खुट्टा मीनको कब्जामा फैलिएको छ, कसरी भनेर प्रकट गर्दछ । एउटा अचम्मको कुरा बाख्रा (मकर) को साथ भयो जो मरेको थियो । बाइबलले यसलाई यसरी वर्णन गर्दछ:
६.तब मैले एउटा थुमा उभिरहनुभएको देखें, जो मारिएको जस्‍तो देखा पर्नुहुन्‍थ्‍यो। उहाँ सिंहासन र चार जीवित प्राणीहरूका बीचमा, र धर्म-गुरुहरूका माझमा हुनुहुन्‍थ्‍यो। उहाँका सात वटा सीङ र सात वटा आँखा थिए, जुनहरू सारा पृथ्‍वीमा पठाइएका परमेश्‍वरका सात आत्‍मा हुन्‌।७. उहाँ जानुभयो, र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको दाहिने बाहुलीबाट त्‍यो मुट्ठो लिनुभयो। ८.जब उहाँले त्‍यो मुट्ठो लिनुभयो, तब ती चारै जीवित प्राणी र चौबीसै धर्म-गुरुहरू थुमाको सामुन्‍ने घोप्‍टो परे। प्रत्‍येकको हातमा वीणा र धूपले भरिएका सुनका पात्रहरू थिए, जो सन्‍तहरूका प्रार्थना हुन्‌।९. तिनीहरूले यसो भन्‍दै एउटा नयाँ गीत गाए: “तपाईं यो चर्मपत्रको मुट्ठो लिने र त्‍यसका मोहोरहरू तोड्‌ने योग्‍यका हुनुहुन्‍छ, तपाईं मारिनुभयो र आफ्‍नो रगतद्वारा तपाईंले परमेश्‍वरको निम्‍ति हरेक कुल, भाषा, मानिस र जातिबाट मानिसहरूलाई छुटकारा दिनुभयो, १०. र तिनीहरूलाई राज्‍य र हाम्रा परमेश्‍वरका पूजाहारी बनाउनुभएको छ, र तिनीहरूले पृथ्‍वीमा राज्‍य गर्नेछन्‌।” ११.तब मैले हेरें, अनि सिंहासन, जीवित प्राणीहरू र धर्म-गुरुहरूका वरिपरि धेरै स्‍वर्गदूतहरूका आवाज सुनें। तिनीहरूको संख्‍या लाखौँ र करोडौँ थियो।१२. तिनीहरू चर्को सोरले यसो भनिरहेका थिए, “मारिएका थुमा सामर्थ्‍य, वैभव, बुद्धि, शक्ति सम्‍मान, महिमा, र स्‍तुति ग्रहण गर्ने योग्‍यका हुनुहुन्‍छ।” १३.अनि स्‍वर्गमा, पृथ्‍वीमा, पृथ्‍वीमुनि, समुद्र र त्‍यहाँ भएको हरेक प्राणीले यसो भनिरहेको मैले सुनें, “सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेलाई र थुमालाई स्‍तुति, सम्‍मान, महिमा, र सामर्थ्‍य सदासर्वदा होस्‌।” १४.तब ती चारै जीवित प्राणीले भने, “आमेन।” अनि ती धर्म-गुरुहरूले घोप्‍टो परेर दण्‍डवत्‌ गरे।
मेष – जिउँदो भेडा !
मानव इतिहासको सुरुदेखि नै योजना बनाइएको अद्भुत समाचार यो थियो कि थुमा मारिएको भए पनि फेरि जीवित भएको छ। मारिएको थुमा को थियो? बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले अब्राहमको बलि प्रतिको बारेमा सोच्दै येशूको बारेमा भने
भोलिपल्‍ट उनले येशूलाई आफूतिर आइरहनुभएको देखेर भने, “हेर, संसारको पाप उठाइलैजाने परमेश्‍वरका थुमा!
यूहन्ना १: २९
येशू क्रूसमा टाँगेको तीन दिन पछि उहाँ मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो। बाइबलले भन्छ कि उहाँ चालीस दिन सम्म आफ्ना चेलाहरूसँगै बसेपछि स्वर्गमा जानुभयो। थुमा जिउँदो छ र स्वर्गमा छ – जसरी मेषले प्रकट गर्छ।
पछि यही दर्शनमा यहुन्नाले देखे:
९.यसपछि कुनै मानिसले गन्‍न नसक्‍ने एउटा ठूलो भीड, जो हरेक जाति, सबै कुलहरू, मानिसहरू र भाषा बोल्‍नेबाट थियो, सेता पोशाक पहिरेर हातमा खजूरका हाँगा लिई सिंहासन र थुमाको सामुन्‍ने उभिरहेको मैले देखें।१०. तिनीहरू उच्‍च सोरले कराए: “सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने हाम्रा परमेश्‍वर र थुमामा मुक्ति छ।”
मीनको माछाहरुले चिन्हित गर्दछन् कि त्यहाँ झुण्डहरु छन् जो थुमामा आएका छन्। तर अहिले क्षय र मृत्युको बन्धन तोडिएको छ। मेषले मीनको माछाहरु समात्दै बन्धनहरु तोडेको छ। तिनीहरूले मुक्ति र अनन्त जीवनको पूर्णता प्राप्त गरेका छन्।
प्राचीन मेष कुण्डली
‘कुण्डली’ ग्रीक शब्द ‘होरो’ (घण्टा) बाट आएको हो र बाइबलले थुप्रै शुभ घण्टालाई चिन्हित गर्दछ। हामी लेखनमा महत्वपूर्ण कन्या देखि मीन सम्मको ‘ कुण्डलीहरुको ‘ बारेमा पढ्दै आएका छौ । तर अन्य ग्रीक शब्दमा कुंडलीलाई स्कोपस (σκοπός) भनेर मेष पढाई गरिन्छ। स्कोपसको अर्थ हेर्नु, सोच्नु वा विचार गर्नु हो। मेषले परमेश्वरको अनन्त थुमाको राशि चिन्ह बनाउँदछ। त्यसैले मेषको ध्यान केन्द्रित गर्न कुनै निश्चित समय अवधि छैन, तर हामी भेडालाई सम्झन्छौं।
३.स्‍वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्‍दा श्रेष्‍ठ ठान।४. तिमीहरू हरेकले आफ्‍नै हित मात्र नखोज, तर अरूका हितलाई पनि हेर। ५.तिमीहरूमा यस्‍तो मन होस्, जो ख्रीष्‍ट येशूमा पनि थियो। ६.परमेश्‍वरको स्‍वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्‍वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्‍ने वस्‍तुजस्‍तो ठान्‍नुभएन।७. तर आफैलाई रित्त्याईकन कमाराको रूप धारण गरेर, तथा मनुष्‍य भएर जन्‍मनुभयो।८. स्‍वरूपमा मानिसजस्‍तै भएर आफैलाई होच्‍याउनुभयो, र मृत्‍युसम्‍मै, अर्थात्‌ क्रूसको मृत्‍युसम्‍मै आज्ञाकारी रहनुभयो। ९.त्‍यसैकारण परमेश्‍वरले उहाँलाई अति उच्‍च पार्नुभयो, र उहाँलाई त्‍यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो, जो हरेक नाउँभन्‍दा उच्‍च छ, १०.कि स्‍वर्गमा, पृथ्‍वीमाथि र पृथ्‍वीमुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँड़ा टेक्‍नुपर्छ, ११. र हरेक जिब्रोले परमेश्‍वर पिताका महिमाको निम्‍ति येशू ख्रीष्‍टलाई प्रभु भनी स्‍वीकार गर्नुपर्छ।
फिलिप्पी २: ३-११
मेष भेडालाई सीमित गर्ने कुनै कुण्डली छैन । तर भेडा महिमाको विभिन्न श्रेणीहरुबाट भएर गएका छन् । हामी उनलाई पहिला ईश्वरको प्रकृति (वा रूप)मा देख्छौं। उनले शुरूदेखि नै मानिस भएर सेवक बन्ने र मर्ने योजना बनाए। कन्याले सबैभन्दा पहिले यस वंशलाई ‘मानवीय समानता’ घोषणा गरे। र मकरले मृत्युप्रति आफ्नो आज्ञाकारिता व्यक्त गरे। तर मृत्यु अन्त थिएन। मृत्युले उनलाई समात्न नसक्ने भएकोले अब भेडा स्वर्गमा जीवित छन्, जीवित र प्रभारी। यो उच्च अधिकार र शक्तिबाट हो जो भेडाले राशिको अन्तिम एकाईलाई कार्यान्वयन गर्दछन् जुन वृषभबाट शुरू हुन्छ। प्राचीन राशि कथा धनुको भविष्यवाणी अनुसार सेवक अब उप्रान्त आफ्नो शत्रुलाई हराउन न्यायको तयारीमा छन् ।
तपाइँको मेष पठन
तपाईं र म यस प्रकारले मेष राशि पढ्न लागू गर्न सक्छौं:
मेषले घोषणा गर्दछ कि अँध्यारो रात पछि बिहानको उज्यालो आउँदछ। जीवनमा तपाईलाई कालो रात ल्याउने बाटोहरु धेरै छन्। तपाईंलाई हार मान्न, छोड्न वा तपाईको लागी बनाइएको भन्दा थोरै चीजमा मिलाउनका लागि लोभ्याउन सक्छ। लचिलोपन भई निरन्तर अगाडि बढ्नको लागि तपाईंले आफ्नो विगतको परिस्थिति र अवस्थालाई हेर्नु पर्छ। तपाईंले आफ्नो अन्तिम भाग्य हेर्न आवश्यक छ। तपाईं त्यस्तो मेष प्राप्ति द्वारा गर्नुहुन्छ। यदि तपाईं मेषसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ भने तपाईं उसको पिठ्ठीउमामा सवारी गर्नुहुन्छ र ऊ सब भन्दा माथिको स्थानमा छ र उसले तपाईंलाई त्यहाँ लैजान्छ। यदि, जब तपाईं भगवानको शत्रु हुनुहुन्थ्यो भने, उहाँसँग तपाईंको सम्बन्ध मकरको माध्यमबाट पुनर्स्थापित भएको थियो,कति धेरै, अब उहाँसँग मिल्दा के तपाईं मेषको जीवनबाट बचाइनु हुनेछ? यो मात्र हो कि तपाईंले उसको मार्ग पछ्याउनुपर्दछ, र त्यसको मार्ग माथि चढ्नु अघि नै तल झर्यो । त्यसकारण तपाईको पनि त्यस्तै हुनेछ।
कसरी निरन्तर अगाडि बढिरहने ? सधैं मेषको जीवनमा रमाउनुहोस्। म फेरि भन्नेछु: रमाउनुहोस्! तपाईको भद्रता तपाईको सबै सम्बन्धहरुमा स्पष्ट देखिन दिनुहोस्। मेष नजिक छ। कुनै कुराको लागि चिन्तित नहुनुहोस् तर हरेक परिस्थितिमा, प्रार्थना र प्रार्थनाद्वारा धन्यवादको साथ, परमेश्वर समक्ष तपाईंको बिन्तीहरू ल्याउनुहोस्। र परमेश्वरको शान्ति, जुन तपाईंको समझभन्दा बाहिर छ, र भेडामा तपाईंको हृदय र दिमागको रक्षा गर्नेछ। अन्तमा, जुन सत्य छ, जुन उत्तम छ, जुन ठीक छ, जुन शुद्ध छ, जुन मायालु छ, जुन कुनै पनि सराहनीय हो — यदि केहि उत्कृष्ट वा प्रशंसनीय छ भने त्यस्ता कुराहरुको बारेमा सोच्नुहोस्।
त्यसैले मेषले प्राचीन राशिको कथाको दोस्रो एकाई बन्द गर्‍यो जसले येशू (थुमा) को विजयका फलहरू पाउने व्यक्तिलाई हुने फाइदाहरूमा केन्द्रित थियो । उहाँको जीवन को उपहार किन प्राप्त नगर्ने ?
अन्तिम एकाई, प्राचीन राशि कथाको ९-१२ अध्यायहरु, मेष भेडा फर्कने बित्तिकै के हुने कुरामा केन्द्रित छ – उहाँले प्रतिज्ञा गरे जस्तो। यो थुमाको त्यहि दर्शनमा घोषणा गरियो जब यूहन्नाले देखे:
तिनीहरूले पहाड़हरू र चट्टानहरूलाई भने, “हामीमाथि खस, र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको मुहारबाट, र थुमाको क्रोधबाट हामीलाई लुकाओ,
थप राशि कथाको माध्यमबाट र मेषमा गहिरिएर
प्राचीन राशीमा यो वृषभमा शुरू हुन्छ। प्राचीन ज्योतिषा ज्योतिषशास्त्रको आधारभूत कुराहरू यहाँ सिक्नुहोस्। कन्याको साथ यसको सुरुवात पढ्नुहोस्।
तर लिखित शब्दहरू गहिरो मेषमा जानका लागि हेर्नुहोस्।
• ब्राह्मण र अवतार बुझ्नका लागि चिन्हहरू
• अब्राहमको चिन्ह – बलिदान
• सृष्टीबाट ब्रह्माण्डिक नृत्य
• येशू, हाम्रो कार सेवक
• पुनरुत्थानको पहिलो फलहरू
• रामायण भन्दा प्रेम कथा राम्रो
• समझ र जीवन को उपहार प्राप्ति
लेखक Ragnarप्रकाशित 05/06/2021 05/06/2021 श्रेणिया ज्योतिषा (Jyotish)टैग्स दैनिक राशिफल, मेशा कुंडली, मेष तारा चिन्ह, मेष नक्षत्र, मेष महिना, मेष राशि, मेष राशिफल, मेषा कुंडली, मेषा मेषतपाईको मेष राशीलाई प्राचीन राशिफल पर एक टिप्पणी छोड़ें
तपाईंको राशिफल - सब भन्दा पुरानो ज्योतिषाबाट
प्राचीन राशिको तपाईंको कन्या राशी
पुरानो राशिको तपाईंको तुला राशि
तपाइँको वृश्चिक रासी पुरातन राशिफल
प्राचीन राशिफलको तपाईंको धनु राशी
तपाइँको मकर राशी प्राचीन राशिफल
पुरानो राशिको तपाईंको कुम्भ राशी
प्राचीन मीन राशिको तपाईंको मीन राशी
तपाईको मिथुन रासीलाई प्राचीन राशिफल
प्राचीन राशिको तपाईंको कर्क राशी